Vaovao - Hisantatra ny laharana voalohany any Alemana ny tobim-piantsonan'ny finday volkswagen amin'ny volana martsa ho avy izao
Hanomboka voalohany any Alemana amin'ny volana martsa ho avy izao ny tobim-pamandrihana finday volkswagen
Ny fizarazarana ny Volkswagen Group dia namolavola sy namoaka tobin-tsolika finday ho an'ny fiara elektrika, scooter elektrika ary bisikileta mandeha amin'ny herinaratra, antsoina hoe toby famahanana finday Volkswagenpassat. Ho fankalazana ny faha-80 taonany, Volkswagen dia hametraka tobin-tsolika finday 12 any Wolfsburg, Alemana. Ny tobim-pamandrihana finday Volkswagen Passat dia manome angovo 200 kWh, mitovy amin'ny angovo e-Golf misy batterie 5.6.
Avy amin'ny angovo “maintso”: angovo sy rivotra ny angovo ao amin'ny onjam-pifandraisana finday. Amin'ny maha tetik'asa fanamoriana fiaramanidina elektrika azy, ny mponina ao Wolfsburg dia afaka mampiasa azy io maimaim-poana. Ny batterin'ny tobin'ny fiantsenana finday dia afaka miasa tsy miankina amin'ny famatsiana herinaratra lehibe ary azo ampiakarina na soloina koa.
Hafindra amin'ny toerana samihafa ny tobin-tseranana finday arakaraka ny filan'ny tanàna ankehitriny. Ohatra, any amin'ny toerana anaovana hetsika ara-tsosialy, lalao baolina kitra, na kaonseritra, ny fiantsonanan'antoka toy izany dia afaka mampiakatra fiara efatra samy hafa, toy ny bisikileta elektrika sy fiara elektrika. Raha fintinina, Volkswagen dia mikasa ny hampiasa vola 10 tapitrisa euro ao an-tanànan'i Wolfsburg, Alemana mba hananganana fotodrafitrasa iray famahanana. Ny voalohany amin'ireo tobim-pamoahana 12 dia haorina amin'ny volana martsa 2019 ary ho tafiditra ao anatin'ny tambajotram-pifandraisana finday.
Klaus Mors, ben'ny tanànan'i Wolfsburg, Alemana, dia nanaiky ny drafitra hananganana tobim-pamindrana finday 12 ao an-tanàna ary nilaza izy hoe: Ny foiben'ilay vondrona, Wolfsburg, no laboratoara voalohany nandramana ireo vokatra vaovaon'i Volkswagen alohan'ny hidirany amin'ny tontolo tena izy. Ny tobim-pandefasana dia dingana iray lehibe amin'ny famoronana tambajotram-bola mahomby izay hampirisika ny olona hisafidy fiara elektrika. Hihatsara ny fomba mandeha amin'ny finday mandeha amin'ny herinaratra. Ny kalitaon'ny rivotra an-tanàn-dehibe no mahatonga ny tanàna hilamina kokoa. ”
Fotoana fandefasana: Jul-20-2020